gabar somali sheegtay ineey uur qaaday ayadoo la wasin | Gaaloos.com
Home » galmada » gabar somali sheegtay ineey uur qaaday ayadoo la wasin
gabar somali sheegtay ineey uur qaaday ayadoo la wasin
Natiijada baaritaan muddo dheer qaatay ee caafimaadka taranka (reproductive health), laguna daabacay Wargayska Caafimaadka Ingiriiska (British Medical Journal), waxay shaaca ka qaaday in mid ka mid ah 200dii oo haweenka Maraykanka ay cunug dhashay ayadoo aan weligeed loo galmoonin.
Natiijadaan waxa ka soo baxay oo lagu saleeyay baaris lagu sameeyay naago iyo gabdho tiradoodu gaarayso 7,870 , da,dooduna u dhaxayso 15-28, qaybna ka ah baarista qaranka ee caafimaadka barbaarta oo socday muddadii u dhaxaysay 1995tii-2009kii.
Caddadka wargayska BMJ ee soo baxaayo 25ka bishaan, wuxuu soo werinayaa in haweenka baaritaankas ka qayb qaatay 45 (05%) ka mid ahi ay sheegeen ugu yaraan hal uur bikradeed aan lala xiriirinaynin farsamada taakulaynta taranka (assisted reproductive technology).
Jason SwainHadalkiiyoo kooban, waxay ku doodeen inay uuraysteen, ayagoo aan weligood loo galmoonin, isla markaana aan lagu sameeynin habka bacriminta qarshada (in vitro fertilisation).
Maqaalka wargayska BMJ wuxuu leeyahay: Dhalmo bikreedda oo loo yaqaano parthenogenesis waxaa laga soo qaatay afka gariigga: parthenos Bikrad Genesis dhalmo, waxay ku dhici kartaa waxaan dadka ahaynin, ayadoo ah natiijada taran hal jinsiyeed (Asexual reproduction) ayadoo koboca uurjiifku uu dhaco bacrimin la,aan, waa sida dooradu ukun u dhasho diiq ama la,aantii.
Baaritaanka uurarbikreedyadan malaha ku dhisan, baarayaasha Jaamacadda North Carolina ee ku taal Chapel Hill, waxay fiiriyeen macluumaatka (data) kumanaan gabdho iyo hablo da, yar oo qayb qaatay baaritaankaan muddada dheer socday.
Baarayaashu waxay ogaadeen in gabdhaha ku doodaayo inay wax galmood ah samaynin xilligii ay uuroobaayeen ay ka siman yihiin dhowr dabiicood. 31% oo ka mid ah gabdhaan waxay saxiixeen waxa loogu yeero ballan bikradeed (chastity pledge) ayagoo ku nidray (vow) sababo diineed dartood inaysan galmood samaynin.
15% oo aan bikrado ahaynin oo ayagan uurAystay waxay sheegeen inay ballankaasoo kale galeen. 45ta isku magacaabay bikrado oo 36 ka mid ahi ay dhaleen, waxay sheegeen in waalidiintoodu aysan weligood ama si dhif ah ugala hadleen galmada ama xakamaynta dhalmada (birth control).
Ku-dhowaad 28% ee hooyooyinka gabdhaha bikrada ah oo ayagana la waraystay waxay sheegeen inaysan lahaynin aqoon ku filan oo ay gabdhahooda ugalas hadlaan galmoodka ito ka-hortagga uurka, marka loo eego 5% ee waalidiinta hablaha uuroobay oo sheegay inay galmo sameeyeen.
Qorayaasha baaritaan oo halku dhig looga dhigay, Sida Hooyo Bikrad ah, waxay leeyahiin: Sheegashooyinka sidaanoo kale ah oo aan suuragal ahaynin cilmi ahaan, waxay muujinayaan in baarayaashu ay ka taxaddaraan inay sharaxaad ka bixiyaan dhabiicad qof sheegtay, xusuus qaldami karto, caqiidooyin iyo doonis gayaysiin karo dadku inay ku gafaan waxay aqoonyahanada u sheegaayaan.
Axmed Moxamed Axmed
Title: gabar somali sheegtay ineey uur qaaday ayadoo la wasin